ကလေးကို အပွဈပေးမယျ့အစား ဘာလုပျမလဲ? | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးကို အပွဈပေးမယျ့အစား ဘာလုပျမလဲ?
ကလေးကို စညျးကမျးသငျပေးတဲ့အခါ ဆုပေးဒဏျပေးစနဈက အမွဲတမျးအကောငျးဆုံး မဟုတျပါဘူးနျော။ အပွဈပေးတာထကျ ပိုကောငျးတဲ့နညျးလမျးတှေ ရှိနပေါတယျနျော။
ကလေးတှအေတှကျ အမှားကိုသိပွီး နောကျပိုငျးမှာ မှနျမှနျကနျကနျနထေိုငျနိုငျဖို့ တဈခွားနညျးလမျးတှကေို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ကလေးတှေ အမှားလုပျတယျဆိုတာ တကယျအမှားလုပျခငျြလို့ ဟုတျခငျြမှလညျး ဟုတျမှာပါ။ ကွီးထှားမှုအ လိုကျ အပွုအမူအပွောငျးအလဲတှေ၊ ခံစားခကျြတှေ၊ ဖြားနာနမေကောငျးတာတှေ စတာတှကေိုပါ ထညျ့သှငျး စဉျးစားပေးဖို့လိုပါတယျ။
အလှယျကလေးပါ။ ကလေးအမှားတဈခုခုလုပျပွီဆိုရငျ ကိုယျကိုယျတိုငျ ကလေးနရောက ဝငျခံစားကွညျ့ပါ။ ကိုယျဆိုရငျရော တဈယောကျယောကျက အရှကျရအောငျပွောဆိုမယျ၊ အျောမယျဟောကျမယျဆိုရငျ ကွိုကျပါ့ မလား။ ဘယျကွိုကျပါ့မလဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒေါသထှကျနခြေိနျမှာ ဘာမြားလုပျလို့ရပါ့မလဲ။ အခြိနျတဈခုပေးပွီး တဈ နရောရာမှာ စိတျကိုအေးအောငျထားပါ။ ကလေးတှမှောလညျး ဒီလိုပဲပေါ့။
ကလေးကို အပွငျထုတျတယျဆိုတာ ကလေးရဲ့စိတျခံစားမှုတှကေို ပွနျလညျသုံးသပျနိုငျအောငျ သုံးခဲ့တဲ့နညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အပွငျထုတျခံထားရတဲ့ ကလေးဟာ သူ့အပွဈကိုသူတကယျပွနျမဆငျခွငျဘဲ ဘယျလိုလကျစား ပွနျခွရေမလဲ၊ လူကွီးစိတျကနြေပျအောငျ ဘာလုပျရမလဲဆိုတာကိုသာ တှေးနပေါလိမျ့မယျ။
ဒါပမေယျ့ လူကွီးပါလိုကျပွီး အပွငျထှကျကာ နရောအသဈတဈခုမှာ စိတျကိုငွိမျအောငျထားပွီး နှဈဦးနှဈဖကျ နားလညျအောငျဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
၂။ ကလေးပွောတာကို နားလညျကွောငျးပွပါ။
ကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ခံစားခကျြကို ထုတျမပွနိုငျဘူးလို့ထငျတဲ့အခါ အျောဟဈသောငျးကနျြးတတျကွပါတယျ။ တဈခါတလေ လူကွီးတှမှောလညျး ငါဒီလိုလုပျလိုကျရမှာ၊ ငါဒီလိုပွနျပွောလိုကျရမှာ စသဖွငျ့ တဈစိမျ့စိမျ့ပွနျ တှေးတောတတျကွတယျမလား။ ကလေးတှမှောလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ကလေးကွုံတှေ့‌‌နရေတဲ့ ပွဿနာကို ဖွရှေငျး ပေးလိုကျရုံနဲ့ ပွီးသှားမယျလို့ထငျပမေယျ့ တကယျတော့ ဒါကွောငျ့သောငျးကနျြးနတော ဟုတျခငျြမှဟုတျမှာပါ။ သူတို့ပွောခငျြတာကို ဖျောထုတျပွနတော ဖွဈနတေတျပါတယျ။
ကလေးက သူခံစားနရေတာကိုပွောပွရငျ အပိုစာသားတှေ အမြားကွီးမပွောဘဲ သူတို့ခံစားရတာကို သိကွောငျး သာပွပါ။ ဥပမာ ကြောငျးမှာသူငယျခငျြးက အရုပျကိုမသိဘဲ ယူဆော့လို့ စိတျဆိုးတယျလို့ပွောရငျ ဪအရုပျ ကိုမသိဘဲ ယူဆော့လို့ စိတျဆိုးတယျဆိုတာ သိကွောငျးသာပွနျပွောပါ။ မမေဖေဖေတေို့အတှကျတော့ ကလေး ပွောတာကို ပွနျပွောရမှာဖွဈပမေယျ့ ကလေးအတှကျတော့ သူပွောတာနားထောငျတယျဆိုတဲ့ အတှေးကို ရစေ ပါတယျ။
၃။ ကလေးနဲ့ အပွနျအလှနျ ပွောဆိုဆကျသှယျပါ။
ဆူပူသောငျးကနျြးတယျဆိုတာ မိဘရဲ့အာရုံစူးစိုကျမှုကို လိုခငျြတာပါ။ ဒါကွောငျ့ တဈခါတလေ ပှဖေ့ကျတာ၊ က လေးနဲ့ဆကျသှယျဖို့ ကွိုးစားတာမြိုးက အောငျမွငျနိုငျပါတယျ။ ကလေးကို နားလညျကွောငျးပွသတာက အငျမ တနျအလုပျဖွဈပါတယျ။ ကိုယျငယျငယျတုနျးကအကွောငျး၊ အခုလကျရှိအကွောငျး စသဖွငျ့ သကျဆိုငျတဲ့အ ကွောငျးအရာလေးကို ပွောပွလိုကျရငျ ကလေးဟာဒီလိုခံစားနရေတာ ငါတဈယောကျတညျး မဟုတျပါလားလို့ သိသှားပါလိမျ့မယျ။
၄။ ကလေးကို ရှေးခယျြဖို့ အခှငျ့အရေးပေးပါ။
လူကွီးတှလေိုပဲ ကလေးတှဟောလညျး ရှေးခယျြစရာမရှိဘူးလို့ ထငျတဲ့အခါ ကွုံရာကို လုပျတတျကွပါတယျ။ တဈခါတလေ သူတို့ကိုယျသူတို့ ကာကှယျပွောဆိုခှငျ့ ပေးသငျ့ပါတယျ။ မကောငျးတဲ့အပွုအမူတှကေို အားပေး ခိုငျးနတောမဟုတျပမေယျ့ ဖွရှေငျးဖို့အခှငျ့အလမျးပေးစတောပါ။
၅။ ကလေးကို မတုနျ့ပွနျခငျ ကိုယျ့ကိုယျကို အခြိနျအရငျပေးပါ။
တဈခါတလေ ကလေးနဲ့မဆိုငျဘဲကို ကလေးလုပျလိုကျတဲ့တဈခုခုက ကိုယျ့ဒေါသကိုလာဆှသလို ဖွဈတတျပါ တယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ တဈမိနဈလောကျ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ပွနျလညျသုံးသပျ၊ အသကျကိုဝဝရှူရှိုကျတာ၊ အိမျသာ ထဲ ခဏသှားနတော စသဖွငျ့ရတဲ့နညျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို အရငျစိတျငွိမျသှားအောငျလုပျပါ။ မဟုတျရငျတော့ နောကျမှ ကိုယျ့ဟာကိုယျပွနျနောငျတရနပေါလိမျ့မယျ။
၆။ ကလေးကို ကိုယျမှားကွောငျး ပါးစပျဖြားတငျမဟုတျ တကယျသိအောငျ ပွောပွပါ။
အပျေါကနညျးတှနေဲ့ အခွအေနတှေကေို တညျငွိမျအောငျလုပျပွီးရငျ ကလေးကိုသူလုပျခဲ့တဲ့အမှားအတှကျ ပွနျ လညျပွငျဆငျခှငျ့ပွုပါ။ ဖှထားတဲ့အရုပျတှကေို ပွနျရှငျးတာ၊ သူငယျခငျြးကိုဖကျပွီး တောငျးပနျတာ စသဖွငျ့ မှားနတေဲ့အခွအေနတေဈခုကို အမှနျပွနျဖွဈအောငျ ပွုပွငျနိုငျကွောငျး ပွပေးရပါမယျ။
၇။ ကလေးကို အခြိနျပေးပါ။
မမေဖေဖေတေို့လညျး အခွအေနကေို ထိနျးသိမျးဖို့ အခြိနျလိုသလို ကလေးတှလေညျး လိုတာပေါ့။ ကလေးက လုပျဆိုတာကို မလုပျခငျြဘူးဆိုရငျ အခြိနျခဏပေးလိုကျပါ။ ဥပမာ အရုပျကို သူငယျခငျြးနဲ့တူတူကစားလို့ ရပွီဆိုရငျ မမေကေို့ပွောနျော။ စသဖွငျ့ပေါ့။ ဒီလိုအခြိနျပေးခွငျးဖွငျ့ ကလေးက ခိုငျးတာလုပျတာမဟုတျဘဲ သူ့ သဘောဆန်ဒအလြောကျ လုပျလိုကျတာဆိုတဲ့ ခံစားခကျြကိုရစပေါတယျ။
ဘယျနညျးကိုပဲသုံးသုံးပါ။ ဒီလိုဖွရှေငျးလိုကျတာကို ကိုယျ့ကိုယျကိုကနြေပျရဲ့လား ပွနျမေးကွညျ့ပါ။ ဒေါသမ ထှကျဘဲ ကလေးဘကျက နားလညျပေးတာဟာ တကယျအထောကျအကူပွုပါတယျနျော။
ကလေးကို စည်းကမ်းသင်ပေးတဲ့အခါ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်က အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အပြစ်ပေးတာထက် ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်နော်။
ကလေးတွေအတွက် အမှားကိုသိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ အမှားလုပ်တယ်ဆိုတာ တကယ်အမှားလုပ်ချင်လို့ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။ ကြီးထွားမှုအ လိုက် အပြုအမူအပြောင်းအလဲတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ ဖျားနာနေမကောင်းတာတွေ စတာတွေကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးဖို့လိုပါတယ်။
အလွယ်ကလေးပါ။ ကလေးအမှားတစ်ခုခုလုပ်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကလေးနေရာက ဝင်ခံစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဆိုရင်ရော တစ်ယောက်ယောက်က အရှက်ရအောင်ပြောဆိုမယ်၊ အော်မယ်ဟောက်မယ်ဆိုရင် ကြိုက်ပါ့ မလား။ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် ဒေါသထွက်နေချိန်မှာ ဘာများလုပ်လို့ရပါ့မလဲ။ အချိန်တစ်ခုပေးပြီး တစ် နေရာရာမှာ စိတ်ကိုအေးအောင်ထားပါ။ ကလေးတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲပေါ့။
ကလေးကို အပြင်ထုတ်တယ်ဆိုတာ ကလေးရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်အောင် သုံးခဲ့တဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်ထုတ်ခံထားရတဲ့ ကလေးဟာ သူ့အပြစ်ကိုသူတကယ်ပြန်မဆင်ခြင်ဘဲ ဘယ်လိုလက်စား ပြန်ခြေရမလဲ၊ လူကြီးစိတ်ကျေနပ်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသာ တွေးနေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် လူကြီးပါလိုက်ပြီး အပြင်ထွက်ကာ နေရာအသစ်တစ်ခုမှာ စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်အောင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ ကလေးပြောတာကို နားလည်ကြောင်းပြပါ။
ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို ထုတ်မပြနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အခါ အော်ဟစ်သောင်းကျန်းတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ လူကြီးတွေမှာလည်း ငါဒီလိုလုပ်လိုက်ရမှာ၊ ငါဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ရမှာ စသဖြင့် တစ်စိမ့်စိမ့်ပြန် တွေးတောတတ်ကြတယ်မလား။ ကလေးတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကလေးကြုံတွေ့‌‌နေရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်း ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးသွားမယ်လို့ထင်ပေမယ့် တကယ်တော့ ဒါကြောင့်သောင်းကျန်းနေတာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။ သူတို့ပြောချင်တာကို ဖော်ထုတ်ပြနေတာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကလေးက သူခံစားနေရတာကိုပြောပြရင် အပိုစာသားတွေ အများကြီးမပြောဘဲ သူတို့ခံစားရတာကို သိကြောင်း သာပြပါ။ ဥပမာ ကျောင်းမှာသူငယ်ချင်းက အရုပ်ကိုမသိဘဲ ယူဆော့လို့ စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရင် ဪအရုပ် ကိုမသိဘဲ ယူဆော့လို့ စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ သိကြောင်းသာပြန်ပြောပါ။ မေမေဖေဖေတို့အတွက်တော့ ကလေး ပြောတာကို ပြန်ပြောရမှာဖြစ်ပေမယ့် ကလေးအတွက်တော့ သူပြောတာနားထောင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကို ရစေ ပါတယ်။
၃။ ကလေးနဲ့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆက်သွယ်ပါ။
ဆူပူသောင်းကျန်းတယ်ဆိုတာ မိဘရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို လိုချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေ ပွေ့ဖက်တာ၊ က လေးနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးက အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို နားလည်ကြောင်းပြသတာက အင်မ တန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်း၊ အခုလက်ရှိအကြောင်း စသဖြင့် သက်ဆိုင်တဲ့အ ကြောင်းအရာလေးကို ပြောပြလိုက်ရင် ကလေးဟာဒီလိုခံစားနေရတာ ငါတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါလားလို့ သိသွားပါလိမ့်မယ်။
၄။ ကလေးကို ရွေးချယ်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးပါ။
လူကြီးတွေလိုပဲ ကလေးတွေဟာလည်း ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ ထင်တဲ့အခါ ကြုံရာကို လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကာကွယ်ပြောဆိုခွင့် ပေးသင့်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကို အားပေး ခိုင်းနေတာမဟုတ်ပေမယ့် ဖြေရှင်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးစေတာပါ။
၅။ ကလေးကို မတုန့်ပြန်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချိန်အရင်ပေးပါ။
တစ်ခါတလေ ကလေးနဲ့မဆိုင်ဘဲကို ကလေးလုပ်လိုက်တဲ့တစ်ခုခုက ကိုယ့်ဒေါသကိုလာဆွသလို ဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ တစ်မိနစ်လောက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်လည်သုံးသပ်၊ အသက်ကိုဝဝရှူရှိုက်တာ၊ အိမ်သာ ထဲ ခဏသွားနေတာ စသဖြင့်ရတဲ့နည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်စိတ်ငြိမ်သွားအောင်လုပ်ပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ နောက်မှ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်နောင်တရနေပါလိမ့်မယ်။
၆။ ကလေးကို ကိုယ်မှားကြောင်း ပါးစပ်ဖျားတင်မဟုတ် တကယ်သိအောင် ပြောပြပါ။
အပေါ်ကနည်းတွေနဲ့ အခြေအနေတွေကို တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးရင် ကလေးကိုသူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားအတွက် ပြန် လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါ။ ဖွထားတဲ့အရုပ်တွေကို ပြန်ရှင်းတာ၊ သူငယ်ချင်းကိုဖက်ပြီး တောင်းပန်တာ စသဖြင့် မှားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို အမှန်ပြန်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်နိုင်ကြောင်း ပြပေးရပါမယ်။
၇။ ကလေးကို အချိန်ပေးပါ။
မေမေဖေဖေတို့လည်း အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အချိန်လိုသလို ကလေးတွေလည်း လိုတာပေါ့။ ကလေးက လုပ်ဆိုတာကို မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် အချိန်ခဏပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ အရုပ်ကို သူငယ်ချင်းနဲ့တူတူကစားလို့ ရပြီဆိုရင် မေမေ့ကိုပြောနော်။ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီလိုအချိန်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးက ခိုင်းတာလုပ်တာမဟုတ်ဘဲ သူ့ သဘောဆန္ဒအလျောက် လုပ်လိုက်တာဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုရစေပါတယ်။
ဘယ်နည်းကိုပဲသုံးသုံးပါ။ ဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်တာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရဲ့လား ပြန်မေးကြည့်ပါ။ ဒေါသမ ထွက်ဘဲ ကလေးဘက်က နားလည်ပေးတာဟာ တကယ်အထောက်အကူပြုပါတယ်နော်။